भरी खुर्सानी - यो शायद हस्ताक्षर पकवान लगभग हरेक आत्म-आदर पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री छ। साथै, प्रत्येक नुस्खा केही फरक ल्याउँछ: केही कि वर्तमान खट्टे खुर्सानी जस्तो चामल बिना जडीबुटी, अरूलाई बस भराई रुचि थप्न, र अरु, र टमाटर राखे। सामान्य कसरी स्वादिष्ट तयार को विकल्प भरी खुर्सानी, धेरै, प्रत्येक एक स्वाद अनुपम छ। यस पकवान कसरी सही गर्न बारेमा कुरा हुनेछ।
भरी खुर्सानी, फ्रान्स को ज्ञात बासिन्दा कसरी तयार गर्न। यी उत्पादनहरू देश को दक्षिण हामीलाई आउँछन्। सुरुमा यी सबै तरकारी मा तयार, त्यहाँ छन् तर, र आफ्नो "सहकर्मी" - टमाटर। तिनीहरूले अरू कसैलाई अघि भरी थिए। यो हाम्रो हलुआ जस्तै पकवान बारेमा गरियो। खाना पकाउन कसरी स्वादिष्ट भरी खुर्सानी, फ्रान्सेली डोरी थाह थियो। यस नुस्खा रूस मा आइपुग्दा हाम्रो रेस्टुरेन्ट मा, यो बदल गर्न थाले। सुरुमा त्यहाँ वर्ष को कुनै पनि समय मा बजार मा प्राप्त गर्न धेरै सजिलो र सस्ता थिए किनभने प्रतिस्थापित खुर्सानी टमाटर। अर्को हामी पकवान थप piquant बनाउन चामल एउटा सानो रकम थप्न थाले। अन्तिम विकल्प, यो corny लाग्न सक्छ रूपमा, टमाटर सस संग संयुक्त। र यो उहाँले हाम्रो दिन पुगेको छ यो फारम छ। आजकल, हामी धेरै यो पकवान प्रेम, तर सबैले एक स्वादिष्ट भरी खुर्सानी कसरी खाना पकाउनु थाह छ। अब हामी यो गोप्य साझेदारी हुनेछ।
हामी खाना तयार गर्न आवश्यक छ कि सामाग्री सुरु गर्न। लिन लाल शिमला खुर्सानी, मासु, purified चामल को 200 ग्राम, टमाटर को पेस्ट वा धेरै ताजा टमाटर को2चमचा,2प्याज2गाजर, वनस्पति तेल, तेजपात, र विभिन्न seasonings। यसलाई हामी आवश्यक तयारी धेरै चिल्लो लागेको Mince छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। बोसो को एक ठूलो रकम को कमी - तपाईं एक बीफ वा पोर्क, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्न सक्छ। टमाटर वा पास्ता - तपाईं निर्णय, तर तपाईं खट्टे उत्पादनहरु प्राप्त हुँदैन कि सम्झना। कसरी टमाटर को साथै बिना स्वादिष्ट भरी खुर्सानी खाना पकाउनु? धेरै सरल - एक सानो थप प्याज राखे। तिनीहरूले थप रसदार र मीठो बाहिर आउँछन्। अर्को तरिका - कुनै हरियो र रातो घण्टी खुर्सानी, आफूलाई स्वाद थप मीठो हुनेछ लिन।
अब हामी हाम्रो भोजन तयार प्रक्रिया सुरु।
स्वाभाविक, पहिलो धुने मरिच र यो कोर देखि स्पष्ट (ध्यानपूर्वक भित्र बाँकी त कुनै बीउ!)।
गाजर र प्याज भुट्नु सुनको खैरो र आधा सम्म चामल जोश सम्म। सबै सामाग्री नुन, मसला, सबै राम्ररी मिश्रित थप्न सँगै मिश्रित र खुर्सानी हालिदिए छन्। राख्न fillings धेरै हुनु हुँदैन, वा तरकारी समयमा खाना पकाउने फुट्छ सक्छ - यो चेतावनी गर्न आवश्यक छ।
पैन मा राखे तयार खुर्सानी, शीर्ष semicircles प्याज र खाडी पात राखे गर्न सकिन्छ। हामी ओवन मा 30-40 मिनेट लागि राखे।
आज हामी तपाईंलाई बताउन कसरी जो यो पकवान देखा स्वादिष्ट भरी खुर्सानी, तयार। हामी आशा तपाईं पनि स्पष्ट हुनेछ कि। स्वादिष्ट र स्वास्थ्यकर व्यञ्जन को तयारी मा प्रगति।
घर बनाएको गाजर: नुस्खा
घरमा आफ्नै हातहरूसँग क्रस कभर बनाउन कसरी
होटल सागर बतास बीच Karon - एक उचित मूल्य मा थाईल्याण्ड मा छुट्टी
Haydarpasha महल होटल 5: * पूर्वाधार, आवास र समीक्षा
Electrophoresis: Contraindications र सङ्केत गर्छ
पशु व्यवहार को विज्ञान एथोलजी भनिन्छ। अनुसन्धान र इतिहास को मुख्य निर्देशन
अस्थानिक गर्भावस्था मा के दुखाइ, कसरी पहिचान गर्ने?
कोशेर उत्पादनहरु - यो के हो?
"स्कैनडिनेविया" - मास्को मा स्कैंडिनेवियाई भोजन रेस्टुरेन्ट। मेनु र मूल्य समीक्षा